Ihostele yabucala -Mountain House e El Manzano
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguVanesa
Ifakwe kwiProvincial Route 89, Sol y Nieve nelali yabakhenkethi, malunga ne-1 km ukusuka kwiReturn to Homeland Monument kwiManzano Histórico Natural Reserve, kwiSithili saseLos Chacayes, kwiSebe laseTunuyán. kwiphondo laseMendoza.
Ihostele yabucala-Indlu yaseMountain enamagumbi abanzi, ejikelezwe yigalari yeglasi evaliweyo enegriza, i-oveni yodongwe, indawo yemidlalo kunye nokuzonwabisa kunye netafile yeping pong kunye negaraji.
Umgangatho ongaphezulu: igumbi elinye kunye nelikhulu elihlala kuwo wonke umgangatho ongaphezulu, kunye negumbi lokuhlambela kunye nethafa elijonge iinduli kunye neArroyo Grande ejikeleze ipropathi.
Igumbi lineebhedi ezimbini eziphindwe kabini kunye neebhedi ezintathu zomntu omnye. Kuvunyelwe ukuba iindwendwe zicebisane, zihambise iibhedi kumgangatho ophantsi okanye zibeke kwindlu ebanzi ezithanda ukulala.
Umgangatho ophantsi: Igumbi lokuhlala elinomabonakude othe ngqo kunye neDVD, ikhitshi, itanki yamanzi ashushu ombane, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye neziko lokufudumeza.
AYINAYO i-WIFI, idatha yeselula yenkampani ngokuqinisekileyo isebenza kakuhle kakhulu. Ezinye iinkampani zinophawu kufutshane nesikhumbuzo saseSan Martín.
Indawo yaseSol y Nieve, iLali yabakhenkethi kwiNdawo yoLondolozo lweNdalo yaseManzano.
Umbuki zindwendwe ngu- Vanesa
Siya kuba kuwe ngamaxesha onke. Ingcebiso malunga nokuhamba kunye nokhenketho jikelele.